मेलोडी टुरमार्फत देश चिनाउँदै
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १२:३२
नेपालको सौन्दर्यलाई अथ्र्याउन विभिन्न उपमा दिइन्छ, भनिन्छ– नेपाल ४ जात ३६ वर्णको फूलबारी हो । देशको यो सौन्दर्य हेर्न, डुल्नुपर्छ । विविध भाषा, संस्कृति, परम्पराको आफ्नै धुन हुन्छ, जुन देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । तर, यो सम्पत्ति कसरी जोगाइरहन सकिन्छ ? आफ्नो देशको माया गर्ने सबैले यो सम्पत्ति जोगियोस्.....
व्यवसायी प्रदीपजङ्ग पाण्डेले एउटा रफ्तार समातिसकेका थिए । तर, समयले उनलाई साथ दिएन, अचानक त्यो रफ्तारमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । त्यो ब्रेकपछि पब्लिक फोरममा पाण्डे नदेखिएको ठ्याक्कै तीन वर्ष भयो । बाहिर बुझाइ छ, यी तीन वर्ष पाण्डेका लागि राम्रा रहेनन् । तर, उनकै लागि चाहिँ यी तीन वर्ष ‘गोल्डेन’ वर्ष हुन् । कैलाशचौर.....
उखरमाउलो गर्मीबीच शान्त वातावरणको खोजी कसले पो नगर्ला र ? झन्, चितवनको गर्मीमा शान्त ठाउँ होस् भन्ने कल्पना त्यहाँ पुगेका पर्यटकले नगर्ने कुरै भएन । गर्मीमा पसिना बगाइरहँदा कल्पनामा आउन सक्छ, वरपर हरियो जङ्गल, छेउमा नदी बगेको शान्त ठाउँमा ‘मीठो हावा खान पाए’ कस्तो हुँदो हो ? यही कल्पनालाई साकार पारिदिन्छ,.....
लेट्स गेट इन्टु अ रुम । ढोका खोल्नेबित्तिकै अगाडि एउटा ठूलो ग्लोब छ, कोठाको देब्रे कुनामा सिसाको सानो टेबलमा । ग्लोब भएकैतिरको ठीक अगाडि दाहिने किनारमा एउटा लामो टेबल छ । टेबलमा दुईओटा कलम र एउटा नोटबुक छ । पख्नुस्, यति नै कोठाको पूर्ण विवरण होइन । कोठामा जे छ, त्यो ठीक यो कुर्सीको पछाडि छ । कुर्सीपछाडि छन्,.....